Usoro oge: ihe ha bụ, njirimara na mbido ụwa | Network Meteorology
Were bụ ọdịdị ala
Echere na a mụrụ ụwa anyị ihe dịka ijeri afọ 4.500 gara aga. Otú o si lee anya n’oge ahụ enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na ihe anyị ma taa. Ọ bụ naanị njikọta nke nkume nke ime ya dị ọkụ ma mee ka ngwakọta nke ihe niile dị na ya. Ka ọ jụrụ, elu nke elu ahụ wee sie ike ma okpomọkụ nke sitere na etiti ụwa gbazee ha ọzọ. Ozugbo ụwa nwere nkwụsi ike ụfọdụ, ihe anyị maara dị ka ị bụ geological.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oge ochie.
2 Nnyocha banyere afọ ala
2.1 Ọ bụ proterozoic
2.2 Oge Paleozoic
2.3 Oge Mesozoic
2.4 Oge Cenozoic
O di nkpa ima na ichebara usoro ihe banyere ala gha, uzo nke geological oge. Mgbe ụwa bụ sọọsọ mịkọta nkume a wụrụ awụ, ị gaghị emeli ya ka ụwa. Usoro nke ịjụ oyi na ikpo nkume ndị ahụ gara n'ihu ruo mgbe ọnọdụ okpomọkụ dara n'elu elu ruo n'ókè nke na a Ala jikọrọ ọnụ anụ. Nke a mere n’ihe dịka ijeri afọ 3.800 gara aga.. N'oge a, ikuku dị ka anyị si mara ya amalitebeghị ma meteorites kụrụ ụwa.
Na mgbakwunye, anyị ga-agbakwunye na ugwu mgbawa na-arụ ọrụ zuru oke, ya mere lava na-asọpụta n'elu ala n'ọtụtụ buru ibu ma mee ka ọnọdụ okpomọkụ dị elu. Sayensị gbalịrị ịmụ oge nile nke mbara ala nke na-egosi otu ụwa anyị si agbanwe ogologo oge. Nnyocha ndị a enwere ike n'ihi ọmụmụ nke nkume na ihe ochie nke dị na ụfọdụ.
Mgbe imesiri nkume, enwere ike ima ihe omuma di iche:
Afọ ole ụwa anyị dị.
Ọnọdụ okpomọkụ dị adị na oge dị iche iche anyị si gafere.
Mmeghari ihe edere na nkpuchi ala nke ahụ emeela ka e nwee ugwu na ndagide.
Mgbanwe dị na nkesa ala na oke osimiri n’elu ụwa. Ihe ndị a eguzosighị ike n'oge niile.
A gbakọọla afọ nke ụwa site na iwu nke ihe ndị na-eme redio na-adị na nkume. A na-agbanwe mkpụrụ atọ uranium ka ọ bụrụ mkpụrụ mbata na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Ọ bụrụ n’ịtụle etu esi eduba na nkume n’ime uranium ore, ị nwere ike gbakọọ mgbe e guzobere nkume ahụ nwere ya. Nke a bụ otu esi enweta ozi site n'oge gara aga.
Nnyocha banyere afọ ala
A na-amụkwa ihe ndị dị iche iche dị na nkume ndị na-edozi ahụ. N'ihi ihe ndị a, ụmụ anụmanụ na osisi dị iche iche dịrị n'oge ndị a amatala. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịmata ihu igwe dị na mpaghara dị iche iche n'ihi ịdị adị nke ụdị anụmanụ na osisi site n'ịmụ banyere bayoloji ha.
Fosili jupụtara na sedimenti. Ihe mgbe ochie abughi ihe ozo kari anumanu ma obu ihe nkpuru osisi puru iche nke echekwara n'okpuru ala mgbe enwere nkume ihe. N’oge ọ bụla nke gafere ụwa anyị, ụdị anụmanụ na ahịhịa na-adịkarị adịla nke na-ekwesighi ndị ọzọ. Nke a bụ otú ndị ọkà mmụta banyere ala nwere ike isi chọpụta mgbe e guzobere otu nkume. N'ihi elu nke ụdị anụ ahụ ị nwere ike ịmata afọ nke nkume.
E wughachiwo mgbanwe site na mbara ala anyi site na geology. Sedimentary nkume bụ ndị a na-edebe na ala oke osimiri na ọdọ mmiri maka nde na nde afọ. Nkume ndị ahụ na-enye anyị ozi dị ka a ga-asị na ha bụ peeji nke akwụkwọ. N'ụzọ dị otú a na ọ kwere omume ịmara na mmalite nke ụwa haswa nwere 4 nnukwu usoro a na-akpọ oge ụwa. Oge usoro ala a bụ: Ihe nchekwa, Paleozoic, Mesozoic, na Cenozoic.
Ọ bụ proterozoic
E kewara ya ụzọ abụọ a maara dịka Archaic na Precambrian. N'oge ochie, anyị nwere mmalite nke akụkọ ihe mere eme ebe ụwa bụ akụkụ nke ikuku na-agba ọkụ nke yiri ọdịdị anyanwụ. N'oge a, e nwere usoro osimiri na ngosipụta mbụ nke ndụ. Nkume ndị mejupụtara elu ahụ gara n'ihu na-ajụkwa oyi ma ikuku ahụ amalite.
Na Precambrian, ala ahụ adịghị ike ma mejupụta ọtụtụ granite na basal. N'oge a, ndị ọrụ mpụga dị iche iche wakporo ọtụtụ mpaghara ụwa dị ka mmiri ozuzo, ikuku na esemokwu dị iche iche nke rụpụtara ala dị larịị. A na - egosipụta ụdị ndụ dị ka ihe dị ndụ dị ka nje taa. Nkpuru ihe ndia enweghi ike ihapu ukwu uzo.
N'oge a, ala ndị nyegoro ikike ugbu a nwere manti ndị siri ike. Nkume ndị ahụ dịkwarịrị limestone, mabul na ụdị quartzite. Ọ bụ n'oge a ka e guzobere nkume ndị jupụtara na carbon. Enwere nnukwu nhicha nke ikuku n'ihi mgbasa nke osisi kọntinent.
A na-ahụta oge a dịka oge azụ na nke nnukwu fern. Ruo ogologo oge, enweghị nnukwu nsogbu dị n'ụwa. A na-ahụta ya dịka otu oge usoro mmụta dị na mbara ala kachasị sie ike. Mzeze na ike na-ebelata enyemaka nke mpaghara oke osimiri.
Na Oge Mesozoic a na-emepụta ya nnukwu mgbawa nke nnukwu kọntinent a na-akpọ Pangea. Nke a bụ ebe tiori nke Efere Tectonic. Ihu igwe nke ụwa anyị na-agbanwe ọtụtụ oge site na iru mmiri gaa n'ọzara. Ọ bụ ebe a ka ụmụ anụmanụ na-agbanwe mgbe niile na mgbanwe na gburugburu ebe obibi. Mkpụbe mmanụ malitekwara.
N'oge a, na-agbatị oge nde 60 gara aga Ọ bụ ebe mbụ mmadụ dị ka mmadụ pụta. Ọ bụ site na ngwụsị nke afọ ice ikpeazụ ndị mmadụ bidoro ije nwayọ nwayọ ha gaa na mmepeanya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge dị iche iche nke mbara ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Were bụ ọdịdị ala
Glacier ịme ngosi uwe